I-China Abs yokubeka imijikelezo yobomi be-lithium ion ye-12V 100Ah kunye ne-BMS yoMvelisi kunye noMthengisi | LIAO
1. Isingxobo seplastikhi esingu-12V 100Ah lithium ion ibhetri yesicelo solwandle.
2. Ubomi bomjikelo omde: Rechargeable lithium ion cell cell, has more than 2000 cycles which is 7 times of lead acid battery.
Umzekelo No. ENGY-F12100T
Amandla okuzimela 100Ah
Ubukhulu. ukuqhubeka kwentlawulo ngoku 100A
Ubukhulu. Ukukhutshwa ngoku okuqhubekayo 100A
Ubunzima 13.5 ± 0.3kg
Ukusetyenziswa Ukusetyenziswa kolwandle, ukusetyenziswa kwamandla, njl.
3. Ubunzima bokukhanya: Malunga ne-1/3 ubunzima bebhetri yelothe.
4. Ukhuseleko oluphezulu: I-LiFePO4 (LFP) lolona hlobo lwebhetri ye-lithium ekhuselekileyo eyamkelweyo kolu shishino.
5. Amandla aluhlaza: Akukho ukutsala kwindalo esingqongileyo.
Ulwazi loShishino kunye neendaba
Kwiminyaka yakutshanje, isihloko sokhuselo lokusingqongileyo sitsala umdla okhulayo. Iindidi zamandla wenqanawa zamandla ziyahamba ngokuthe ngcembe ukusuka kumbane we-fossil ukuya kwi-carbon esezantsi. Umkhwa wombane uyanda ngokuthe chu, kwaye sele uqalile ukukhuthazwa ngamandla kwaye usetyenziswa kwiinqanawa.
Iinqanawa zombane zinezibonelelo zokhuselo lokusingqongileyo oluhlaza, ukungangcoliseki, ukhuseleko kunye nexabiso eliphantsi lokusetyenziswa, kwaye iindleko zabo zokusebenza ziphantsi kakhulu kuneenqanawa ze-diesel kunye ne-LNG. Ukongeza, iinqanawa zombane zilula kubume, zizinzile ekusebenzeni, kwaye ziphantsi kwiindleko zolondolozo, ezenza ukuba zilungele imeko yexesha elizayo.
Iinqanawa zombane kufuneka zithwale inani elikhulu leebhetri, kwaye zineemfuno eziphezulu zokukhutshwa kwebhetri, ukujikeleza, kunye neendleko.
Ngokwendlela yokukhetha yohlobo lwebhetri, xa kuthelekiswa neebhetri ezikhokelela kwi-asidi, iibhetri zentsimbi ye-lithium phosphate zinezibonelelo ezibonakalayo ngokubhekiselele kukhuseleko, ukuxinana kwamandla, kunye nokusebenza komjikelo. Nangona kunjalo, iibhetri ze-lithium iron phosphate okwangoku zisetyenziswa ngokubanzi kwiibhasi zamandla amatsha nakwiindawo zokugcina amandla. Iibhetri zentsimbi ye-lithium phosphate ezisetyenziswa kwiinqanawa zombane ziya kujongana nokuqinisekiswa kobuchwephesha ngakumbi, zifuna iinkcukacha ezingqongqo kunye namaxabiso aphezulu emveliso.
I-lithium iron phosphate prismatic batriams ezinokusebenza okungcono ngokubhekiselele kukhuseleko, umjikelo kunye nereyithi zezona ziqhelekileyo. Kwaye njengoko inani leebhetri ze-lithium zentsimbi ye-phosphate ezisetyenziswa kwicandelo leenqanawa zombane zonyuka kwixesha elizayo, ixabiso leemveliso liyakubonisa imeko esezantsi.
Kwixesha elizayo, umkhwa wenqanawa ye-lithium yebhetri iya kugxila ikakhulu kwizikhephe, izikhephe zokubona indawo, iinqanawa zemithwalo yangaphakathi, iimarike zokurhuqa izibuko kwizixeko eziselunxwemeni ezingasemlanjeni, njl. , eya kukhawulezisa ukusetyenziswa kweebhetri ze-lithium kwiinqanawa.
Egqithileyo Uhlobo lweBolt prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 iseli yebhetri yokuhambisa umbane kunye nokugcina amandla
Okulandelayo: China umenzi 19 intshi yokubeka ezifuna 48V 50Ah lithium ion ibhetri (LiFePO4zonxibelelwano